Guriga Al Capone ee Varadero | Safarka Absolut
Guriga Al Capone ee Varadero
Varadero waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Cuba, oo caan ku ah xeebaheeda iyo muuqaalkeeda. Magnetism-keedu wuxuu soo jiitay malaayiin booqdayaal ah nooc kasta. fiican iyo mid xunba. Xaqiiqdii, waxay ahayd halkaan mid ka mid ah mooryaanta ugu caansan taariikhda go'aansaday inuu guri dhiso oo uu ku raaxeysto janno. Tani waa Guriga Al Capone ee Varadero.
Haddii aad u safarto Cuba oo Varadero uu ku jiro liistada aad ku socoto, waa inaad waqti yar ku qaadataa barashada meeshan. Gurigu wuxuu ku yaal Coco Cove, oo lagu dhisay furaha u dhexeeya badda iyo Paso Malo Lagoon. Goob runtii aan caadi ahayn.
1 Al Capone, boqorkii Maafiyada
2 Guriga Al Capone maanta
2.1 Ku cun «Casa de Al»
Al Capone, boqorkii Maafiyada
Wuxuu ku dhashay Brooklyn 1899, Alphonse Gabriel Capone (sida fiican loogu yaqaan al Capone) wuxuu taariikhda ku galay inuu yahay mobster-ka ugu caansan adduunka.
Capone, oo ka soo jeeda qoys Talyaani u haajiray, wuxuu shaqo bilaabay isagoo aad u yar. Dambiyada abaabulan ee Chicago sanadihii 20-meeyadii, mahadsanidiisa caqliga iyo damiir laawaha wuxuu si dhakhso leh ugu soo baxay safafka dunidan hoose, isagoo noqday qof caan ka ah khamaarka sharci darada iyo ganacsiga tahriibinta khamriga.
Al Capone wuxuu kulayl badan ku qaatay Cuba, halkaas oo uu ganacsigiisa kaga qabtay meel ka baxsan sharciga.
Sanadahaas Cuba waxay u ahayd nooc ka mid ah casino weyn muwaadiniinta Mareykanka ee ugu awoodda badan. Sababtaas awgeed, Al Capone wuxuu go'aansaday inuu u guuro qayb ka mid ah meheraddiisa halkaas. Iyo inuu si dhow u xakameeyo, wuxuu lahaa guri raaxo leh oo laga dhisay mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan jasiiradda. Gurigiisa "Kuuba" wuxuu ahaa caleenta Californian ee caadiga ah oo leh derbiyo dhagax ah, balakoonno alwaax buluug ah lagu xardhay, iyo saqaf saqaf ah.
Capone wuxuu kulayl badan ku qaatay hawlgabnimadiisa Cuba. Sannadihii ugu dambeeyay noloshiisa, isagoo durba si daran u xanuunsanaya, wuxuu go'aansaday inuu keligiis ku go'doomiyo gurigiisa weyn Miami, halkaas oo uu ugu dhintay cudur sambabka ah sanadkii 1947. Qawlaysatadu ma qiyaasi karin in gurigiisa uu jecel yahay ee Varadero uu ku dambayn doono inay la wareegto dawlada shuuciga ah ee Fidel Castro dhawr sano ka dib.
Ka tagistii tobanaan sano, gurigu wuxuu xarun u noqday Luis Augusto Turcios Lima Sports Initiation School (EIDE), laakiin bilicdiisii ​​hore dib uma soo noolaaneyso ilaa 90-yadii.
Guriga Al Capone maanta
Burburkii Gidaarkii Berlin 1989 iyo burburkii midowgii Soofiyeeti waxay ahaayeen dhacdooyin soo maray cawaaqib xumada dhaqaalaha Cuba, kaasoo tobanaan sano lagu taageerayay kaalmadii Midowgii Soofiyeeti.
Waxay ahayd markaa xukunkii shuuciga Cuba ee go'aansaday inuu albaabka u furo dakhliga soo gala turismo, iyadoo si xishood leh loo aqbalay hanti-wadaagga ay ku caayeen hoggaamiyeyaashii Kacaanku. Arrinka badbaadada.
Macnaha guud, Wasaaradda Dalxiiska ee Cuba waxay la wareegtay lahaanshaha Casa de Al Capone ee Varadero, iyadoo laga bilaabay ganacsi u soo baxay si guul leh: makhaayad la yiraahdo "La Casa de Al".
Ku cun «Casa de Al»
Makhaayada Al Capone ayaa noqotay sheegasho dalxiis oo awood badan booqdayaal badan. Qaar badan oo ka mid ah kuwa maanta u safraya Varadero ma seegto fursad ay ku keydiso miis halkan ku yaal. Fikradda ayaa ah in lagu raaxeysto qado ama casho jawi dabiici ah oo qurux badan isla markaana isla waqtigaas noolee halyeeyga Al Capone.
Guriga waxaa lagu sharraxay waxyaabo fara badan oo tilmaamaya muuqaalka gangster-ka caanka ah. Kuwa ugu fiican ee la ogyahay waxaa laga helaa irridda laga soo galo: nuqul ka mid ah Cadillac V8 Magaalada madow, gaariga uu jecel yahay Al Capone, oo la dhigto beerta.
Gelitaanka makhaayada 'La Casa de Al' ee Varadero
Markii ay gudaha u galaan dhismaha, macaamiisha waa la salaamayaa sawir weyn oo madow iyo caddaan ah ee mobster-ka. Dhexdeeda ayuu ka muuqdaa isagoo dhoola cadeynaya, xiran koofiyaddiisa dabeecadda isla markaana cabaya sigaar Cuban dhab ah Waa uun kii ugu horreeyay ee indha indheyn badan oo sugaya qado. Laakiin qurxinta asalka ah ee meesha ma aha barta kaliya ee xoogan ee meeshan. Aragtida badda iyo quruxda hareeraha ayaa ah doodo iyaga lafteeda qiil u siinaya booqashada.
Qadada ama cashada kadib, dadka soo booqda waxay ku raaxeysan karaan cabitaan (ama "wax yar oo cabitaan ah", sida ay ku yiraahdaan Cuba) Capo Bar, taas oo qayb ka ah dhismaha, bar lagu qurxiyay qaabka 30-meeyadii halkaasoo ay sidoo kale jiraan tixraacyo ku saabsan sawirka Al Capone.
Ugu dambeyntii, waa in la sheegaa laba dhinac oo hadheeyay booqashadii goobtan astaanta u ah. Marka ugu horeysa, su'aasha anshaxa ee ah in la sharfo dabeecad xun oo naftiisa ku kala soocday iyada oo la geynayo dhammaan noocyada dambiyada. Dhanka kale, aragtida ayaa difaacday dad badan oo ku sugan gudaha iyo dibedda Cuba, in Al Capone uusan waligiis guri ku lahayn Varadero. Sikastaba, yaanan u ogolaan in xaqiiqadu baabiiso fikrad wanaagsan,
Taariikhda SoomaaliyaMakhaayadaha iyo baararka
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Guriga Al Capone ee Varadero